Civil 3D N'ezie maka ọrụ obodo - Ọkwa 1 - Geofumadas
Ihe, ebupụta na ntinye. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ ndị isi na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere Topography na Ọrụ Obodo
Nke a bụ mbụ site na usoro 4 setịpụrụ akpọrọ "Autocad Civil3D maka nyocha na ọrụ obodo" nke ga-enyere gị aka ịmụ ka esi ejikwa ngwanrọ Autodesk dị egwu wee tinye ya n'ọrụ na saịtị dị iche iche. Bụrụ onye ọkachamara na ngwanrọ ahụ wee nwee ike igbanye ala, gbakọọ ihe na ọnụahịa ihe owuwu ma mepụta atụmatụ dị ukwuu nke ụzọ, àkwà mmiri, nsị mmiri n'etiti ndị ọzọ.
Usoro mmụta a abụrụla ngwaahịa nke oge raara onwe ya nye, ọrụ na mbọ, na-anakọta data kachasị mkpa na isiokwu nke Civil and Topographic Engineering, na-achikota nnukwu amamịghe ma na-eme ka ha baa uru, ka i wee nwee ike mụta ihe n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe. Ngwa maka mkpụmkpụ ma dị mkpirikpi maka isiokwu ọ bụla ma na-eme data niile (ezigbo) na ihe atụ anyị na-enye ebe a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite ijikwa ngwanrọ a, isonye na usoro a ga - azọpụta gị izu ọrụ site na nyocha n'onwe gị ihe anyị nyochaworo, ime ule ndị anyị mere, yana ịmehie ihe ndị anyị mere.
Ka anyị mee ka ị mata ụwa a nke Autocad Civil3D, nke bụ ngwá ọrụ dị ike iji belata oge dị ukwuu n'ichepụta na ịgbakọ ma na-eme ka ọrụ gị dị mma.
Ònye ka ọ bụ?
A na-eji usoro a maka ndị ọkachamara, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na ndị ọkachamara nwere ihe ọmụma na Topography, ọrụ obodo ma ọ bụ ndị metụtara ya, ndị chọrọ ịmalite ụwa nke imepụta ụzọ, ọrụ ndị a na-arụ ọrụ, ọrụ ala na ihe owuwu ma ọ bụ ndị chọrọ iwusi nkà ha ike na njikwa nke nke a dị ike.
AKW CONKWỌ AKW BKWỌ BASIC (1 / 4)
• Okwu Mmalite nke onyinye:
- Nkọwa nke ngwanrọ software.
- Nchịkọta na ndepụta nke iwu na isi ọrụ.
- Nhazi oru ngo na Civil3D.
- Bubata nke isi ihe site na ederede ederede.
- Nkọwa nke ụdị isi ihe, ederede na nkọwa.
- Nhazi, mbipụta na nhazi nke isi ala.
• ANY. ANYA
- Ihe okike na nkowa nke ihe uzo TIN.
- Nkọwa nke ụdị na ngosipụta (ahịrị ahịrị, eserese nke mkpọda, maapụ ntụ ntụ, ala ikuku).
- itingdezi na nhazi nke mbara ala.
• AKW HKWỌ HORIZONTAL
- Ihe okike na nhazi nke itinye ugbenye.
• AKW VKWỌ AKERTKỌ
- Ihe okike na nhazi nke profaịlụ nke ogologo nke ala (vetikal vetikal).
- Nhazi nke itinye kwụ ọtọ (ọkwa ngo).
Gịnị ka ị ga-amụta
Soro na njiri mara ụzọ na ọrụ obodo na obodo na -egosi.
Mgbe ị na-eme nyocha ihe omimi na mpaghara ahụ, ịnwere ike ibubata isi ala ndị a na Civil3D ma chekwaa otutu oge na eserese.
Mepụta mbara ala dị larịị na 2 na 3 ma mepụta mgbako dịka mpaghara, olu na ọrụ ụwa
Rụpụta usoro kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ na-enye ohere iji chepụta ọrụ dị larịị dịka okporo ụzọ, ọwa mmiri, àkwà mmiri, okporo ụzọ ụgbọ elu, ahịrị ọkụ dị elu, n'etiti ndị ọzọ.
Kwadebe atụmatụ ọkachamara iji gosipụta ọrụ ma na atụmatụ yana profaịlụ.
Iwu ihe omume
Kọmputa nwere ihe ndị dị mkpa chọrọ Hard Disk, RAM (opekata mpe 2GB) na Intel Processor, AMD
Autocad Civil 3D ngwanrọ ọ bụla
Ezigbo ihe omuma banyere nyocha, Civil ma o bu ihe ndi ozo
Thenye bụ maka ya?
E wuru nkuzi a maka onye ọ bụla chọrọ ịmụ ka esi ejikwa ngwanrọ a.
Teknụzụ, Teknụzụ ma ọ bụ ọkachamara na nyocha, Civil ma ọ bụ ndị nwere ndị chọrọ imeziwanye arụmọrụ na nka ha na sọftụwia.
Onye obula choro imuta ihe edere n’uche na oru ihe osise.
Usoro - CivilWorks Ihe nkuzi nke obodo 3D
Previous Post«Previous Usoro Google Earth - site na ncha
Next Post Usoro Hydrosanitary na-eji Revit MEPNext »
N'ezie Blender - Nhazi obodo na odida obodo
Blender 3D Site na nkuzi a, ụmụ akwụkwọ ga-amụta iji ngwa ọrụ niile wee depụta ihe na 3D, site na ...
CREO bụ ihe ngwọta 3D CAD nke na - enyere gị aka imeziwanye ngwa ahịa nke ngwaahịa ka ị nwee ike mepụta ka mma ...